Xeradii ay ka guureen Imaaraadka Oo Lagu Wareejiyay Ciidamo Kale -
HomeWararkaXeradii ay ka guureen Imaaraadka Oo Lagu Wareejiyay Ciidamo Kale
Xeradii ay ka guureen Imaaraadka Oo Lagu Wareejiyay Ciidamo Kale
April 24, 2018 F.G Wararka 0
Xerada Ciidanka Jeneral Gordan ee Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada Somalida, ayaa lagu wareejiyay ciidamada Danab oo laga keenay Gobolka Shabellaha hoose, gaar ahaan Garoonka Ballidoogle.
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay, kadib markii shalay Iska hor imaad uu ka dhacay Xerada Ciidamada Imaaraadka, iyadoo taliska ciidanka Militariga Somaliya ay sheegeen in iska hor imaadkaasi ay ka dambeeyeen askar rabtay inay qaataan saanad Militari.
Xalay fiidkii ayaa lagu wareejiyay ciidamada Danab Xerada ciidanka Imaaraadka ee Degmada Hodan, waxaana halkaasi lagu arkaayay gaadiidka gaashaaman ee ciidankaan ay wataan.
Ciidamadii Imaaraadka ee xeradan ku sugnaa, ayaa noqday kuwa la xiray iyo kuwa Isaga Tagay, kadib dagaalkii shalay ka dhacay Xeradaasi.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Somaliya C/wali Jaamac Gorod, ayaa sheegay in la soo xiray tiro askar ah oo isku dayday inay saanad Militari kala baxaan Xerada Ciidamada Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada Somalida.
Inkastoo ay Caqabad ku naqanayaan Magaalada Muqdisho Waayo ciidamada magaalada galay waxa wanaagsan in la xanaaneeyo oo la diwaan geliyo waayo waxa ay ahaayeen ciidamo soomaaliyeed ma aheeyn ciidamo imaaraatka leeyahay.